Kheladi - काउन्टर अट्याक: सुन्दर खेलको छवि धमिल्याउने प्रयास
अखिल नेपाल फुटबल संघले आफ्नो आधिकारिक वेभ साइटमार्फत मंगलबार दिउँसो एउटा जानकारी सार्वजनिक गर्यो, 'शनिबार र मंगलबार हुने मोरिससविरुद्धका मैत्रीपूर्ण खेल हेर्न दशरथ रंगशालामा दर्शक आउन पाउनेछन् । त्यसका लागि एक हजार र पाँच सय रुपैयाँ टिकटदर तोकिएको छ।'
कोभिड १९ महामारीले नेपालमा विकराल रूप लिइरहेको समय भएकाले एन्फाले कुल क्षमताको एक तिहाइमात्र टिकट बेच्ने बताएको छ । सरकारी मापदण्ड पनि त्यस्तै छ । सरकारले जारी गरेको पछिल्लो मापदण्डअनुसार रंगशाला निम्त्याइएका एक तिहाई दर्शकमध्येबाट एक तिहाईको आयोजकलेआफ्नै खर्चमा आरडिटी परीक्षण गराउनुपर्छ । तर, एन्फाको जानकारी यस विषयमा भने मौन छ ।
एन्फाले सरकारी नियमअनुसार आएका दर्शकमध्ये एक तिहाईको आरडिटी परीक्षण पनि गराउला । अरु स्वास्थ्य मापदण्ड पनि लागू गरिएला । बहसको विषय यो होइन । कुरा त परीक्षण गराएकामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढिमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको यस्तो डरलाग्दो समयमा फुटबल हेर्न दर्शकलाई रंगशाला निम्त्याउनु ठिक हो कि होइन भन्ने हो ।
जनताको स्वास्थ्यप्रति सरकार र समर्थकको स्वास्थ्यप्रति नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय कति संवेदनशील छ ? भन्ने हो । एन्फाले जारी गरेको पछिल्लो जानकारीले केही लाख रुपैयाँका लागि दर्शक बोलाउने फुटबल संघ र त्यसका लागि अनुमति दिने सरकार पूर्ण रुपमा संवेदनहिन भएकै पुष्टि गर्छ ।
पछिल्लो समय धेरै संक्रमण देखिएको ओमिक्रोनको असर कम हुँदै गएको कारण सरकारको स्मार्ट लकडाउन केही खुकुलो छ । तर, जोरबिजोर प्रणालीका कारण काठमाडौ उपत्यकाका सडक खाली छन् । फिल्म हलहरु सबै बन्द छन् ।
स्कुल कलेजमा ताल्चा लगाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा विवाहका लागि बढिमा २५ जनासम्म भेला गराउने अनुमति माग्नेको घुँइचो छ । होटल, रेस्टुरेन्ट र पार्टी प्यालेसमा स्वास्थ्यका कडा मापदण्ड उत्तिकै कडाइका साथ लागू गरिएका छन् । समग्रमा भन्दा नेपाल बन्द छ । अझ काठमाडौं उपत्यकामा सख्ति झनै बढि छ ।
तर रंगशालामा फुटबल हेर्न चाहिँ हजारौंको संख्यामा पनि भेला हुन पाइने, त्यो पनि टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रशारण हुने खेलमा । सम्बन्धित निकाय जनस्वास्थ्यमा संवेदनशील भएको भए यस्तो समाचार आउने थिएन । बरु पोखरामा एउटा सामान्य क्लबले गर्ने नेपाली फुटबलकै सबभन्दा प्रतिष्ठित नकआउट प्रतियोगिता आहा रारा गोल्डकपमा आयोजक सहाराले विना दर्शक क्वार्टरफाइनलसम्मका खेल सम्पन्न गरिसकेको छ । तर, एन्फा भने केही लाख रुपैयाँको लोभमा जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गरिरहेको छ ।
मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नका लागि नेपाल आएको मोरिससको टोलीका चार खेलाडीमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । बन्द प्रशिक्षणमा रहेका नेपाली खेलाडीमा पनि संक्रमण देखिन सक्ने सम्भावना कायम छ । कोभिडकै बहानामा एन्फाले पूर्व घोषित अरु थुप्रै कार्यक्रम थाँती राख्दै आएको छ ।
धेरै दिन भएको छैन, अधिकांश खेलाडी संक्रमित भएका कारण एन्फा स्वयमले यही रंगशालामा हुने तय भएको सहिद स्मारक लिगअन्तर्गत च्यासल र पुलिसबीचको खेल अन्तिम समयमा स्थगित गरेको । मोरिससविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अहिले ३४ खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा छन् ।
मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नका लागि नेपाल आएको मोरिससको टोलीका चार खेलाडीमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । बन्द प्रशिक्षणमा रहेका नेपाली खेलाडीमा पनि संक्रमण देखिन सक्ने सम्भावना कायम छ । कोभिडकै बहानामा एन्फाले पूर्व घोषित अरु थुप्रै कार्यक्रम थाँती राख्दै आएको छ । यसकारण पनि मैत्रीपूर्ण खेलमा दर्शक बोलाउने कदम सुहाउँदो छैन ।
कोभिडको पहिलो लहर चलिरहँदा लिभरपुलले च्याम्पियन्स लिगको खेलका लागि एट्लेटिको मड्रिडलाई एन्फिल्डको मैदानमा आतिथ्य गर्यो । बेलायतमा महामारीले विकराल रुप लिनुमा त्यही खेलको जमघटलाई कारण मानियो । प्रशासनको सामान्य कमजोरीका कारण सुन्दर खेल एक पटक बदनाम भयो ।
कुनै समय एथ्लेटिको मड्रिड र लिभरपुलबीचको खेलले दुई युरोपेली मुलुकमा कोभिड संक्रमण फैलाएर भयावह स्थिति बन्न सहयोग गरेको थियो । र, नेपाल जस्तो स्वास्थ्य संरचना कमजोर भएको मुलुकले त्यस्तै जोखिम लिनु पक्कै सान्दर्भिक हुँदैन ।
कोभिड महामारी तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरिसक्दा सुन्दर खेलको छवि धुमिल्याउने अरु पनि केही यस्ता गतिविधि भएका छन् । यसबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्ने समय हामीले पाइसकेका छौं । त्यसैले रंगशालामा पाँच हजारको हाराहारीमा जनता भेला गर्ने योजनामा पूनर्विचार गर्नु आवस्यक छ ।
एन्फाले केही लाखको लोभमा संवेदनाहिन निर्णय गर्यो होला । तर, त्यसमा राज्य चुप लाग्दा धेरै प्रश्न उठेका छन् । सबथोक बन्द हुँदा पनि फुटबलले यस्तो अव्यवहारिक सुविधा पाउँदा सामान्य जनता पनि ससंकित हुनु स्वभाविक हो । 'आखिर एन्फाले मात्र किन यस्तो सुविधा बारम्बार पाइरहेको छ? यसमा कुनै आर्थिक वा राजनीतिक कारण लुकेको त छैन,' भनेर सोध्ने अधिकार सचेत नेपालीसँग सुरक्षित छ ।
अन्यथा जोरविजोर प्रणालीले खाली बनाएका सडक, बन्द सिनेमा हल, स्कुल र कलेज, बिवाहका लागि अनुमति माग्न प्रशासन कार्यालयमा लागेको भिड अनि विना दर्शक पोखरा रंगशालामा भएका खेलहरुले सरकार र एन्फालाई नराम्ररी गिज्याउने छ ।
मोरिससविरुद्धको खेलमा एक हजार र पाँच सय टिकट मुल्य
सेनेगल र मोरक्को क्वार्टरफाइनलमा